Fivezọ ise iji bulie ọdịnaya gị ahịa egwuregwu | Martech Zone
Y’oburu n’in’eme udiri ahia nke udi o bula, mgbe ahu ị n’eji usoro. O nwere ike ọ gaghị abụ usoro gọọmentị, atụmatụ, ma ọ bụ atụmatụ dị irè, mana ọ bụ atụmatụ.
Chee echiche banyere oge, akụ, na mbọ niile na-aga ịmepụta ọdịnaya dị mma. Ọ bụghị ihe dị ọnụ ala, yabụ na ọ dị mkpa ka ị duzie ọdịnaya ahụ bara uru site na iji usoro kwesịrị ekwesị. Ndị a bụ ụzọ ise iji bulie egwuregwu azụmaahịa gị.
Nwee ọgụgụ isi na akụ gị
Marketingre ahịa ọdịnaya nwere ike ịdị oke ọnụ, ma nke ahụ ọ pụtara na itinye oge dị ukwuu maka oge iji mepụta ọdịnaya, ma ọ bụ na-emefu ego iji nyefee ya na okike. Ihe dị oke ọnụ dị ka ahịa ọdịnaya kwesịrị iji amamihe mee ihe ma lee anya nyocha bụ akụkụ buru ibu na nke ahụ.
You nwere ike iche n'echiche itinye ihe ndị ahụ niile naanị iji chọpụta na ị na-agbanye ọdịnaya gị na Facebook mgbe imirikiti ahịa ahịa gị na-abịa site na Instagram na Pinterest? Nke ahụ na-afụ ụfụ; na ị gaghị abụ onye mbụ nwere nke ahụ. Wepụta oge iji lelee nyocha nke mgbasa ozi mmekọrịta gị ka ị nwee ike iduzi ọdịnaya gị na nyiwe ziri ezi na ndị na-ege ntị.
Na-ezukọ na Otu Gị Ọtụtụ mgbe
Nwere ike ịnwe otu ndị raara nye azụmaahịa ọdịnaya, ma ọ bụ na ị gaghị. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ dị mkpa iji zute opekata mpe otu izu n'izu ma metụ aka na ndị ọrụ maka ịmepụta na ịkwalite ọdịnaya gị. Ọ bụrụ na ị nwere ike, na-ezukọ kwa ụbọchị.
Kwuo maka ihe ọ bụla dị ọhụụ emere kemgbe ahụ ị gara n’ihu. Lelee anya n’ọdịnihu ma nyefee ndị kwesịrị ekwesị ọrụ. Tụlee ihe ndị asọmpi gị na-eme yana otu ị ga - esi melite ọdịnaya ha.
Bonnie Hunter, ahịa blogger na Ọstrelia na DeeMyX
Nzukọ ndị a bụkwa oge kachasị mma iji chịkọta isi gị ma mee nkwekọ ụbụrụ. Kedu ụfọdụ isiokwu na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ nke otu gị nwere ike ịdị na-ewu ọdịnaya gburugburu?
Rụpụta ndị na-ege gị ntị
Lekwasị anya n’ịgbalite ndị na-ege gị ntị. Iwu ọhụrụ na-ekwupụta na data ga-achịkọta site na nkwenye, nke pụtara na ejirila obi wepụta data ma ghara iwe ihe. Marketingzụ ahịa ọdịnaya dị mkpa karịa ọbịbịa nke iwu a n'ihi na ọdịnaya dị mma bụ ụzọ dị mma iji gbaa ndị mmadụ ume iji obi ụtọ nyefee ozi ha.
Mgbe ndị mmadụ nwere mmasị na ọdịnaya gị, ha ga-enye data ha n'ihi na ha chọrọ ịnọgide na-anata ihe gị. Chee echiche nke ọma otu ihe atụ dị mma karịa ịchapụ ịntanetị maka data nke ndị na-enweghị ike ilekọta obere. Ọ na - enye gị ohere iwulite mmekọrịta gị na ndị mmadụ ma nye ha ohere iche na ọdịnaya gị.
Billy Baker, ọdịnaya ahịa na Stmụ akwụkwọ na Na-esote Ọrụ.
Were ọnọdụ okpomọkụ nke otu mbọ gị si dị irè site na ile anya na ndị na-ege gị ntị, ịlele ọnụọgụ gị na afọ gara aga, ma hụ ma ọnụ ọgụgụ ndị na-edebanye aha gị kwekọrọ na mbọ ahịa ahịa.
Setịpụ Ihe Mgbaru Ọsọ Ndị Kwesịrị Ekwesị
Y’oburu na imaghi ihe ebum n’uche ahia gi, olee otu ị g’esi nweta ha? Akụkụ dị ukwuu nke ịtọlite ​​ihe mgbaru ọsọ ndị a ga-adabere na nchịkọta gị, ihe atụ:
Kedu ikpo okwu ị na-ekepụta ebumnuche?
Ebee ka ị chọrọ ịnọ n'ime otu afọ?
Youchọrọ ime ka ndị na-eso ụzọ gị dịkwuo elu, wee jiri mmadụ ole?
Ma ọ bụ ma eleghị anya, ị chọrọ ịbawanye mmekọrịta onye ọrụ na okporo ụzọ. Ozugbo ị nwere nnukwu ihe mgbaru ọsọ gị kwa afọ, oge eruola ịmebi nke ahụ n'ime obere ihe mgbaru ọsọ kwa ọnwa. Ihe ndị a ga - abụ mbido ụkwụ gị iji rute nnukwu ebumnuche ahụ. Nzọụkwụ ikpeazụ bụ ịchọpụta ihe ọrụ ị ga-arụ kwa ụbọchị iji nweta mgbe ị ga-eme ihe mgbaru ọsọ ndị ahụ ka ukwuu.
Kọwaa otu You'll Ga-esi Nwee Ọganiihu
Ikwesiri ịgbaso arụmọrụ nke ọdịnaya gị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịma ka ọ siri dị irè. You ga - agbaso usoro metro siri ike dịka ọrịre ma na - eduga ma ọ bụ ndị dị nro dịka ndị ọrụ mmekọrịta na - elekọta mmadụ? Fọdụ metrik ị ga-agbasoro ịchọ soro bụ usoro eji eme ihe (ole mmadụ na-ele ma ọ bụ budata ihe gị), ịkekọrịta usoro, usoro nhazi usoro na usoro ahịa.
Ahịa ọdịnaya bụ ọrụ dị ike nke chọrọ njikere ịgbanwe usoro mgbe ihe anaghị arụ ọrụ. Ọ dị mkpa inwe ihe mgbaru ọsọ ma mara ihe metric gị iji nwee ihe ịga nke ọma. Ọ bụghịkwa ihe dị ọnụ ala, yabụ mara ihe otu ị si eji akụ gị. Soro ndụmọdụ ise a ka ị kwalite egwuregwu azụmaahịa gị.
Tags: contentcontent Marketingotu ahia ahiaọdịnaya ọdịnayaọdịnaya ọdịnayaihe ịga nke ọmaotu ọdịnaya
Martha Jameson bụ onye ndezi ọdịnaya na onye nyochagharị maka Essayassistant.org na ỌmụmụBrits. Tupu ịchọta mmasị ya maka ide ihe, Martha rụrụ ọrụ dị ka onye mmebe weebụ na njikwa. Ihe kachasị mkpa ya na-eji ahụmịhe ya, mkpali ya na ihe ọmụma ya iji nyere ndị na-agụ ya na blọọgụ aka Ederede.